China White Oak Multifunctional Kaviri Mubhedha Solid Wood Yekurara Mubhedha # 0113 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
White Oak Multifunctional Kaviri Mubhedha Solid Wood Yekurara Mubhedha # 0113
Zita: Mubhedha wemubhedha
Muenzaniso nhamba: Amac-0113
Kukura: 1570 / 1870mm * 2100 * 890mm
Mubhedha wakagadzirwa nematanda akasimba
White oak inotengeswa kubva kuNorth America ine yakasimba kugadzirwa, kusimba, uye kugadzikana kwakanaka. Iyo ndeimwe yemasango ekumusoro-soro uye iri nani pane mizhinji miouki tsvuku iri pamusika. Tsanga dzehuni dzakajeka uye dzakajeka, huni dzakapusa uye dzakasikwa, dzakarara pairi, sekunge iwe uri muhombe Mukumbundikira kwechisikigo, vanhu vanogona kurara murunyararo. Iyo 100% yakasimba yemubhedha yehuni haina mimwe mitsara. Iyo ine chaiyo yakasarudzika chimiro, yechokwadi hana zvinhu, chimiro chakasimba, uye yepamutemo yakasarudzika kuongororwa kwe50 makore ekugara.
Iyo-yakasimba-huni huni puranga mutsara yakaringana kutakura huremu hwemhuri. Uyu mubhedha wakapetwa une chimiro chakasimba uye wadarika iyo inomira yekumanikidza kutakura kutakura bvunzo. Iwe haufanire kunetseka nezve kutsigirwa kugadzikana uye kurara murunyararo. Mutsara furemu unogadzirwa neakasimba machena oak, aine maviri pasi. Tsigira makumbo kutsigira zvakasimba mateti.
Multifunctional pamubhedha soketi
Masokisi akavakirwa-mukati ekuchengetedza pamusoro wemubhedha, zvigaro zvinowoneka patsva kunetseka. Kanenge mushure mekutenderera mana Chete nekungwarira "kudzidziswa" ndipo pandingasangana newe. Simbisa iyo tenon uye tenon chimiro, uye iyo inotakura-inorema kugona inowedzera kugadzikana.
Yakakwira-mhando Hardware yakagadziriswa mubhedha
Iyo yemhando yepamusoro Hardware accessories inosungira iyo yemubhedha muviri, iyo yakasimba uye yakasimba, isiri nyore kuita ngura, uye yakasimba huni mubhedha une yakasimba simba inotakura kugona. Iyo yakanyarara inonzwa pad inodzivirira iyo puranga uye pamusoro pemubhedha kubva kukwesha, uye kurara pasina ruzha kupindira, ichikubvumidza iwe kukotsira nyore. Iyo yekumashure hombe inogona kuenzaniswa zvakasununguka Iyo pamutsago yakasununguka kuzendamira, uye kutamba parunhare hakukuvadze maziso ako.
Bold one-chidimbu mubhedha makumbo
Pasi pemubhedha mune T-beam, izvo zvigadzirwa hazvina kujeka, uye zvakagadzirwa nehuni hwakasimba, rutsigiro rwetatu, kumanikidzwa kwemubhedha MAX, hapana kutendeuka, uye kurara kunovimbiswa. Makumbo emubhedha akakora, hazvisi nyore kuzunza, uye hazvisi nyore kutyoka. Yakagadzirirwa mushure mekutsvagurudza kwakawanda Nemubhedha wakaringana, vana vanogona kugara pairi, uye pane nzvimbo yakawanda pazasi yekuti iwe uise shangu, nezvimwe.
Yemazuva ano yakapusa solid solid huni mbiri
Mubhedha wehuni wakasimba unogona kuratidza mweya wehungwaru kubva pakusarudzwa kwezvinhu kusvika pakuumbwa
Tiri kutsvaga mbishi zvigadzirwa pasi rese
Yakanyatsosarudzwa uye yakawana yemhando yepamusoro chena oak
Kungogadzira iyi yakachena huchenjeri
Zvakareruka uye zvinoshanda zvakafanana nazvo
Pashure: Wholesale DWF inflatable yoga mat tsika mutambo wemhepo track Gymnastics Tumbling Mat Mhepo Floor 0393
Zvadaro: Nyore Windsor Mubhedha Solid Wood Mubhedha Wemubhedha Mubhedha Princess Bed # 0114
Inflatable Surfboard Sup Mujaho Yoga Paddle Boa ...
Taekwondo Kudzidziswa Mhepo Maneti Inflatable Mhepo ...
Aeliana Mudiki Mhuka Hutch neRamp 0243
Kurarama mukamuri fenicha dehwe yanhasi yakasimba huni ...